Tsara ve ny snap Kickr? - Hevitra
Tena > Hevitra > Heverin'i Wahoo kickr snap - fanontaniana mahazatra
Heverin'i Wahoo kickr snap - fanontaniana mahazatra
Tsara ve ny snap Kickr?
Amin'ny maha-zandrin'ny voalohany azykickr, ny elektromagnetikaanatn'nymanolotra aLEHIBEfahatsapana ny arabe, fifandimbiasam-potoana eo amin'ny haavon'ny fanoherana sy ny fametrahana mora. Izy io koa no mpanazatra mahay kodiarana mangina indrindra nosedraina. Na izany aza, ny fandrefesana herinaratra dia mitaky fanamafisana roa alohan'ny ahazoanao hery marina.11.17.2017
Tsy mila fitaovana be dia be ianao vao manomboka amin'ny Zwift. Ankoatry ny famandrihana anao amin'ny Zwift, ny hany ilainao dia mpampiofana turbo tsotra, sensor hafainganam-pandeha, ary avy eo ny smartphone fotsiny hanombohana mampiasa Zwift - na izany aza, afaka mampiasa vola amin'ny fitaovana mahatalanjona ianao hanatsarana ny zavatra niainanao. Nanome taminay tamin-katsaram-panahy i Wahoo ny totohondry Kickr feno nanananay mba hanananay mpanazatra mahay, mpankafy ary fiakarana izay miova toa ny any ivelany. - Ie.
Ny fanontaniana, na izany aza, inona marina no maha samy hafa ny traikefa eo amin'ireo fanomanana roa ireo? Noheverinay fa tonga ny fotoana nanaovanay ny kajy roa nifanaovana mba hahitana. (mozika hip-hop ambony) Hanomboka amin'ny fananganana ambaratonga fidirana izahay. Nahazo mpanazatra mpanohitra kodiarana tsotra izahay.
Izy io dia manana singa fanoherana andriamby izay azo ovaina amin'ny tanana amin'ny fampiasana an'io levera io. Izay efa nanao bisikileta nandritra ny fotoana ela dia ho hainy amin'ity karazana mpanazatra turbo ity satria, tsoriko, izany no toetran'ny mpanazatra turbo rehetra. Ary noho izany, azonao atao ny mahazo azy ireo izao somary mora vidy.
Ka fampidirana tsara ho an'ny tontolon'ny fiofanana an-trano nolazaiko tany am-piandohana fa mila sensor haingana ianao. Ny tena zava-dehibe anefa dia ny fantsom-pandeha haingam-pandeha izay mifandray amin'ny fitaovana hampiasanao azy. Raha manana sensor hafainganana ianao izay mandefa ny ANT +, mety ho mila adaptatera aho haka ilay signal avy amin'ny solo-sainao na ny laptop-nao.
Amin'ity tranga ity dia mandefa amin'ny alàlan'ny Bluetooth ihany koa izy, izay midika fa azoko atao ny mandray azy io mivantana amin'ny finday avo lenta izay hampiasako amin'ity tranga ity. Aza adino ny mampiditra an'ity sensor amin'ny hafainganam-pandeha ity amin'ny kodiarana aorianao satria io ihany no mihodina, mazava ho azy. Amboarinao amin'ny fitaovanao avy eo, izay ahafahany milaza amin'i Zwift ny hafainganan'ny kodiarana any aoriana.
Ny zavatra marani-tsaina dia raha milaza amin'i Zwift izay mpampiofana ampiasainao koa ianao satria nanisa ny habetsaky ny dragona noforonin'ny mpampiofana tsirairay avy. Midika izany fa raha fantany faingana ny fihodinan'ny kodiarana any aoriana, dia afaka manisa ny habetsaky ny herinao hampiasanao azy. (Joy Techno Music) - Ka eto isika manana ny Wahoo Kickr, ny Kickr Climb, ary ny Kickr Headwind.
Ny Wahoo Kickr no mpanazatra turbo marani-tsaina faratampony aminy, ary ny tsy fitoviana mazava tsara tamin'ity iray ity sy ilay nampiasain'i Si teo aloha dia ny tsy misy kodiarana aorina mivantana ilay bisikiletako izay tonga miaraka amin'ny cassette-ny avy. Izany dia nilaza fa tsy mampiasa ny kodiaranao intsony ianao ary tsy hiaraka amin'ireo marika mainty ireo manerana ny rindrina. Fa ny ao anatiny no tena mahasamihafa azy.
Ny Turbo dia manana singa fanoherana miovaova sy metatra elektrika, izay midika fa izy io dia manisa tsara ny heriko ary manitsy ny fanoherana tsapako amin'ny pedal arakaraka ny toerana itondrako ny Zwift. Midika izany fa ny fiakarana miakatra dia tena hahatsapa ho miakatra ary tsy maintsy manova fitaovana mifanaraka amin'izany ianao. Voalohany indrindra, ary ny ananantsika eto dia ny Wahoo Kickr Climb.
Io dia manahaka azy ho azy ny firongatra ary maka tahaka izay mitranga ao amin'ny Zwift. Miakatra hatramin'ny 20% ary 10% mirona. Ary farany manana ny Kickr Headwind izahay, ary ity dia mpankafy iray izay mifandray amin'ny mpanazatra turbo anao na ny monitor ny tahan'ny fo ary manitsy ny fihenan-tsakafo mifototra amin'ny hamafin'ny dianao.
Mazava ho azy fa afaka mandresy an'ity ianao ary mandroroa an'io hatramin'ny farany ambony indrindra. - Chris, tokony hanao Zwift ve isika? - Andao hatao. - Alohan'ny hanombohantsika, mifona, ry sakaiza, noho ianao nanao ny fananganana ambaratonga fidirana.
Sendra izany fa tsy manana adaptatera ilaina ho an'ity mpampiofana ity aho mba hahafahako mametraka izany amin'ny bisikileta samihafa. Ka mila milaza amiko ny zava-drehetra fotsiny ianao ry sakaiza - tsy azoko antoka raha izany no fialan-tsiny tena tso-po indrindra, fa andao hiroso. - Eny, andao handeha. (mozika techno malefaka) - Ny zavatra voalohany ho tsikaritranao rehefa mitaingina fananganana ifotony dia ny tsy fisian'ny tamberina mivantana amin'ny alàlan'ny pedal.
Tsy misy fiovana amin'ny fanoherana rehefa mitaingina miakatra na midina. Na dia tena malahelo an'izany aza aho, heveriko fa mety angamba ny milaza fa raha mbola tsy nitaingina mpanazatra mahay ianao dia tsy fantatrao izay tsy hitanao, koa mifantoha amin'izay tsy anananao, fa amin'ny inona manao izany ianao. Azonao atao ihany ny mampiasa ny lafiny sosialy rehetra an'ny Zwift, miditra ary manova ny avatar anao, mandroso amin'ny ambaratonga rehetra, mizaha izao tontolo izao ary mandray anjara amin'ny fitsangatsanganana ataon'ny vondrona, mbola eo ny fiofanana.
famerenana palitao bisikileta
Azonao atao ny misoratra anarana sy manararaotra ny fotoam-pivarotan-tsofina maro izay ananan'i Zwift ary mitaingina azy ireo Aza hadino fa ny ezaka ataoko dia mbola mitovy ihany na iza na iza mpampiofana. Ny tombantombana amin'ny fampisehoana dia tsara ho an'ny fampiofanana koa, indrindra raha ny amin'ny fanarahana ny fanatsarana anao. Raha milaza aminao izy fa manana FTP 200. nahazo watts ary nampitomboinao ho 220 izany, dia tombony azo tokoa izany.
Eny, mety tsy dia marina io, ary ny haavon'ny lesoka dia mety hidika fa nandeha tamin'ny 240 watt ka hatramin'ny 270 ianao, nefa hevero fa raha mampiasa ny fanamboarana mitovy ihany isika dia tokony hitovy farafaharatsiny ny valiny. (mozika techno malefaka) - Ary ahoana ny fanamboaran-tsika rehefa avy eo? Inona no azontsika, manaraka ny tenin'i Chris fotsiny momba ny fiofanana, ny metatra an'ity Kickris ity dia 2% fotsiny, izay midika fa afaka mampiasa azy io isika hanaraha-maso akaiky ny fampiofanana ataontsika, ary midika koa izany fa tena afaka mahita ny ny valiny manokana dia azo ampitahaina amin'ny olon-kafa, satria ny fahitsiana 2% dia zavatra toy ny fenitra volamena. Mety tsy tianao ny mihomehy ny FTP anao eo imason'ny olon-kafa, fa ny dikan'izany amin'ny Zwiftis fa azonao atao ny mandefa valiny amin'ny Zwift Races satria fantatr'i Zwift Races fa mampiasa fitaovana azo itokisana ianao afaka miantso azy io ho fomba erg, ary eto no hamoronana ny mpanohitra ny fanoherana tena ilaina takiana isaky ny elanelam-potoana.
Ary mifototra amin'ny kajy nataon'i Zwift mifototra amin'ny fahaizako manokana. Amin'ny fampiharana dia midika izany fa raha, ohatra, ny elanelam-potoana dia 350 watt, raha mbola mamadika ny pedal aho dia hiteraka io fanoherana io io mpanazatra io. Midika izany fa hanao 350 watts aho na manao haingana na miadana ny familiako.
Na izany aza, amiko dia angamba ny fanatsarana ny traikefa amin'ny fiara no tena manamarika. Ny valiny azonao avy amin'ny mpampiofana dia miankina amin'ny zava-mitranga eo amin'ny efijery. Ka rehefa manomboka miakatra aho dia hahatsapa ny fanoherana, midika izany fa tsy maintsy manova fitaovana aho, ary avy eo miaraka amin'ity Kickr Climb anoloana ity, miova ny firongatry ny bisikileta, izay midika fa miova koa ny toeran'ny vatako.
Na dia tsy miady amin'ny hery misintona aza aho izao, dia mahatsapa fa ny mifanohitra amin'izay no izy rehefa midina aho, mihena ny fanoherana ary mandeha isika. Heveriko fa ara-drariny ny milaza fa ny fampiasana mpampiofana mahay dia afaka manatsara ny fampihetseham-batanao, toy ny hoe raha nanana metatra tamin'ny bisikiletanao ianao, satria tena afaka mihady lalina ianao ary manome antoka fa ny fampihetseham-batana, izay ataonao dia tena mety indrindra. Ary avy eo ny zavatra hafa ankoatry ny fiofanana, raha mpankafy mitaingina Zwift fotsiny ianao, ny fiarahamonina, ny singa ara-tsosialy avy eo manana io fanamboarana io dia hahatonga ny traikefa ho tsara kokoa aminao.
Fa ny vaovao tsara dia na izany na tsy izany, mazava ho azy, tsy dia ilaina loatra izany. Na izany aza, ny zavatra hataoko raha manandrana mitondra an'io mankany amin'ny fananganana ifotony aho dia karazana fampangatsiahana anao voalohany. Noho izany dia mitaingina mafana ianao ao anatiny, ary noho izany dia tsara kokoa noho ny tsy misy ny mpankafy taloha rehetra.
Na dia mazava ho azy aza, arakaraka ny maha-tsara kokoa ny mpankafy anao, dia ho tsara kokoa ny fihenan-tsasinao. Ny zavatra hafa dia ny finday avo lenta ampiasain'i Chris dia mora ampiasaina, indrindra raha mandehandeha ianao dia ho hitanao fa ny fampiasana efijery lehibe kokoa dia hahatonga anao hifandray bebe kokoa. Ka takelaka iray, na amin'ity tranga ity, Apple TV mifandray amin'ny efijery goavambe, ary tena mahatsapa ho mifandray amin'ny tontoloko virtoaly aho.
Ary ny zavatra tsara momba azy dia maimaim-poana ny telefaona ho an'ny fampiharana miaraka. (mozika technologie upbeate) - Elaela aho tsy nampiasa an'i Zwifton mpanazatra turbo anaty trano mahazatra toy izao, ary hafahafa ihany ny tsy mahatsapa fiakarana na mahatsapa ny fihoarana toy ny sasany? mandehana mandalo ahy fa raha tsy mbola niainako izany dia tsy ho fantatro fa tsy nahalala n'inona n'inona aho - Tsia, fa satria lasa mpanazatra mahazatra ianao ka lasa mpanazatra mahay, inona no tsapanao taminao, akaiky ity dingana ity? - Tena tiako ilay izy satria tsy manao fampiofanana foana aho ka rehefa niditra aho dia te-hanao dia an-tongotra fotsiny na handeha mafy isaky ny mandeha, toy ny resaka fomba, ary mahatsiaro ho mamely. ianao fa tsy mila manova fitaovana hanovana ny hamafin'ny tena nankafiziko azy io fa heveriko fa izany no izy, amin'ny fampiasam-bola fanampiny ataon'ireo mpanazatra ifanakalozan-kevitra ireo dia azonao ilay singa izay tena mitombina kokoa ary manaparitaka traikefa somary somary lavalava ihany koa. ny fananana fihetsika, araka ny voalazanao ny bisikiletako dia mizotra fotsiny eo rehefa manomboka ny firongatra.
Tsy maintsy mihetsika ianao amin'ny zava-mitranga eny an-dàlana, noho izany manimba zavatra, miovaova, mila mandray ny cadence anao ianao, zatra ireo fiovan'ny fanoherana, ary toy ny mitaingina ivelany izany. Na izany aza, heveriko fa ny tanjaky ny fananganana fototra dia ny mbola fanananao ny ankamaroan'ny singa ao amin'ny Zwift hahafahanao manana ny fampihetseham-batana rehetra - eny - ary hahatsapa ho ara-dalàna tanteraka ianao. Azonao fehezina tanteraka izy ireo ary manana ny singa ara-tsosialy koa ianao, noho izany dia miara-mitaingina ihany isika, sa tsy izany? - Eny, ary izaho-- - Na dia heveriko aza fa nazerako ianao - Uh, kely amin'ny firongatry ny mpanazatra turbo mba hahafantarako ny fiezahako mafy.- Eny.
Mety ve izany? - Ie, angamba. Raha ny tena izy tsy dia lavitra loatra - eny, andao handeha. (mozika techno upbeate) Mba hamonosana an'ity lahatsoratra ity dia tokony hilaza zavatra iray ambonin'ny zavatra rehetra isika, ary izany dia manana mpanazatra amin'ny faran'ny karazany hafa tanteraka isika eto.
Ary tsy toe-javatra izany na misy satria misy ireo eo afovoany, sa tsy izany? Noho izany dia afaka mahazo mpampiofana tsotra ianao izay tsy mandany vola be izany, nefa mbola manome anao ny fahatsapana fifandraisana azonao avy amin'ny Zwift. Noho izany dia manana singa fanoherana miovaova ianao ary manana metatra elektrika ao anatiny.- Mba hahazoana tombony betsaka amin'ny mpampiofana turbo mahazatra anao, te-hitazona ny tsindry kodiaranao ianao, ary koa ny tsindry sy ny mari-pana amin'ny rivotra ao amin'ilay efitrano ampiasainao. ao amin'ny.
Izany dia hanampy anao hanana metrika fampisehoana tsara kokoa sy tsy miovaova. - Eny, marina izany, ka isaky ny mitsambikina eo ianao dia fantatrao fa mandrefy ny ezaka ataonao io, na dia tsy voatery ho marina toy ny refin'ny herinaratra na mpampiofana mahay mifampiresaka aza izany. Ary andao hatrehana izany, na dia tsy misy ireo singa ifandraisana aza, dia mahazo ny tombotsoanao rehetra amin'ny Zwift ianao.
Ka manana ny fampihetseham-batana rehetra toa ny nolazainao teo aloha ianao. Manana ny singa ara-tsosialy rehetra ianao, afaka miditra amin'ny dian'ny vondrona ianao, afaka mandeha mamakivaky ireo tontolo namboarina manokana amin'ny bisikileta ireo. Marina, alao antoka fa tafiditra ao amin'ilay tsikera etsy ambany ianao.
Manantena aho fa hitanao fa mahasoa ity lahatsoratra ity mifandraika amin'izany amin'ny voalohany indrindra izay tena ilainao hanombohana amin'ny Zwifting na tena handraisanao ny dingana manaraka fa ampahafantaro anay ihany koa izay ampiasanao. Tena hahaliana tokoa ny mamaky ireo ao anaty hevitra.
Azoko atao ve ny mampiasa snap Wahoo Kickr miaraka amin'i Zwift?
Ny fitaovana: nyWahoo KICKR SNAP
Ny fiarovana ny bisikiletanao amin'ny mpampiofana dia mila segondra vitsy, ary mampifandray izany amin'nyZwiftrindrambaiko amin'ny solosaina dia haingana sy moramampiasany tsorakazo ANT + USB (fividianana misaraka manodidina ny 10), izay miasa amin'ny Windows sy MacOS.16.11.2016
Mpanazatra foosball Wahoo vaovao. Triathlon Taren dia ao Zwift ankehitriny. Ny tetikasako amin'ity herinandro ity dia ny manafana azy eto. (Mozika faly) Oooh maraina Trainiacs.
Araka ny azonao lazaina, vanim-potoana fiofanana indray. Zahao ity ivelany. Eny Winnipeg, ratsy tarehy, efa an-tongotra ny oram-panala any ivelany isika, saingy mieritreritra aho fa ity ririnina ity dia tsy hitifitra toy ny ririnina lasa satria mpanazatra kicker wahoo vaovao, ary b, Triathlon Taren izao amin'ny Zwift.
Tsindrio aho ary avelao aho hihazakazaka ary hanaovako endrika tsara tarehy ary hanazava ny fomba fananganana kicker wahoo aho ary manomboka milalao miaraka amiko ao amin'ny Zwift. Eny, ry Trainiacs, andao aloha hiresaka momba ny fanomanana, tsy mila Zwift ianao hampandehanana ny Wahoo Kicker ary tsy mila ny Wahoo Kicker hampandeha ny Zwift ianao. Ny hany ilainao amin'ny Zwift dia mpanazatra izay mifandray amin'i Zwift amin'ny alàlan'ny Bluetooth ary manova ny hafainganana.
Toy ny mpanazatra azo fehezina, saingy tsy mila an'izany akory ianao ary avy eo ny hany ilainao amin'ny Wahoo Kicker dia ny Wahoo Kick, eh. Saingy tsy misy zavatra toa an'i Zwiftor, fampihetseham-batana azo alamina azo ampitaina amin'ny mpandaka azy, tsy mahita zavatra ianao ary mandoa vola iray taonina ho an'ny mpanazatra fiara mivantana. Ny antony anaovako an'ity lahatsoratra ity aminao dia satria i Zwift sy i Kicker angamba no roa tonta ho mpampiofana mahay indrindra momba ny fampiofanana anatiny.
Ireo no orinasa tia manao zavatra mamaky tany any. Ka dia miaraka tsara tokoa izy ireo ary amin'ny zavatra niainako dia mandeha tsara tokoa izy ireo, haingana tokoa. Eny, andao hiresaka ny fomba hametrahana izany tsikelikely.
Ny zavatra voalohany tianao hatao dia ny mifantina toerana ho an'ny kicker-nao. Azonao atao izany avy amin'ny toerana nanaovanao ny fampiofanana rehetra nampiasanao tamin'ny mpampiofana anao taloha. Ny mpandaka dia manana toerana kely kokoa noho ny ankamaroan'ny mpanazatra, indrindra ny mpanazatra ahy taloha, ary indrindra rehefa aforinao ny mpandaka dia mila dian-tongotra kely kokoa noho ny maro amin'ireo 50 pounds hafa, s Uper Duper, avo lenta, kiraro kiraro matanjaka, izay misy.
Manoro hevitra anao aho ny hametraka kidoro matavy. Wahoo no mivarotra ireo. Afaka mampiasa tsihy yoga ianao, lamba famaohana fotsiny no ampiasaiko.
Saingy mila ao anatin'ny sivy metatra amin'ny outlet elektrika ianao na manana tady fanitarana satria, rehefa mandeha ny kicker dia mila ampidirina ao anaty rindrina izy io ary rehefa mahita ianao dia hahita jiro mena mijanona tsy miova. Ie, marina aho Ant + ary avy eo dia hisy jiro manga hanaparitaka fa afaka mampifandray ireo fitaovanao amin'ny alàlan'ny Bluetooth ianao. Zavatra iray tokony ho ao an-tsaina, miaraka amin'ny kicker dia tsy mila sakana eo ambanin'ny kodiarana eo aloha ianao.
Natsangako izy ary nihevitra fotsiny aho fa mila sakana eo ambanin'ny kodia eo aloha satria saika ny mpanazatra rehetra dia mila sakana eo ambanin'ny kodia eo aloha. Tsy nila izany tamin'ny farany. Ary ny antony mahatonga an'io dia ilay antony iray ihany izay ilana toerana kely kely kokoa noho ny mpampiofana maro ary izany dia satria mpanazatra fiara mivantana.
Izany hoe, apetakao ao aminao ny bisikiletanao, tsy apetrakao amin'ny kodiarana hafa ny kodiarana bisikileta izay manohitra ny kodiaran'ny bisikiletanao. Raisinao avy hatrany ny kodiaranao any aoriana ary apetakao ao anaty vatan-dehilahy izay napetraka eo amin'ilay kicker io mihitsy. Mila manamboatra ny haavon'ny tendrony aoriana amin'ny bisikiletanao ianao amin'ny alàlan'ny fikororohana ny barika, izay eo amin'ny stabilizer afovoan'ny kicker, amin'ny haben'ny kodiarana voalaza ao amin'ny bisikiletanao.
Ka ho an'ny ankamaroantsika dia 700c izany. Angony izao ny vodin'ny bisikiletanao tahaka ny fanangonana kodiarana any aoriana. Saingy manahirana kely izany satria, tsy toy ny fanangonana kodiarana any aoriana, izay tena ahodinanao ny kodiarana sy ezahina hitazomana ny bisikileta, dia mifanohitra tanteraka amin'ireo mpampiofana tsy mihetsika ary mila mamindra ilay bisikileta ianao.
Ka mitaky fahazarana kely vao zatra. Fa rehefa apetraka eo amin'ny toerany ilay izy dia ampidiro ilay sotera niaraka tamin'ilay mpandaka azy, aza mampiasa ny kodiarana aoriana misy anao fa handinika an'io ianao ary te hahafoy ilay sambo omen'i Wahoo anao. Ary hanombohana, te-hampidina ny fampiharana fitaizam-batana Wahoo ianao ary misy fampiharana maromaro izay navoakan'i Wahoo.
Ny tadiavinao dia ilay nantsoina taloha hoe Wahoo Fitness. Maimaimpoana tanteraka izany ary mila mameno ny antsipiriany rehetra ianao. Mandalo azy rehetra ary ny zavatra mahafinaritra momba azy dia ny mampifandray azy miaraka amin'ny mpampiofana anao ary misoratra anarana ny vokatra.
Manarona ny fiantohana anao manontolo ary avy eo mitarika anao amin'ny tsiroaroa. Mandehana ary alao antoka fa mifoha daholo ny fitaovanao. Fanaraha-maso ny tahan'ny fonao, ny sensor sensor anao, ny metatra herinao.
Izay rehetra tianao hiresahana amin'ny kicker miaraka amin'i Zwiftor dia vita amin'ny alàlan'ity app W Fitness ity ary amin'ny zavatra niainako dia naka ny zava-drehetra haingana be ny bluetooth tao amin'ny app W Fitness fitness. Milamina tsara ary avy eo vita ny fananganana ny kickeris, azonao atao ny manomboka. Aorian'izany dia te hanangana Zwift ianao.
Raha manao izany amin'ny solosaina finday ianao dia mandrosoa ary alao ny Zwift a. misintona pp amin'ny solosainao findainao na azonao sintonina amin'ny fitaovana iPhone na Android izany. Raha manao izany ianao, dia manoro hevitra aho ny hisintona fampiharana hafa antsoina hoe Zwift Mobile Link izay hanampy hampifandray ny Zwift anao amin'ny findainao amin'ny Zwift amin'ny solosainao finday ho an'ny playback amin'ny solosaina findainy.
Ka nakariko tamin'ny solosaina findainy aloha, fa ny hitako dia ny bluetooth amin'ny macbook-ko dia tsy mandray na iza na iza amin'ireo sensor. Tsy handray ny tadin'ny heriko io, sa tsy izany? Raha tsy noraisiko ilay mpandaka dia tsy haka ny fanaraha-maso ny fitepon'ny foko izany. Toy ny tsy nisy noraketina.
fianjerana tour de france
Na izany aza, ny rindranasa Zwift tamin'ny findaiko dia afaka nandrakitra haingana ny zava-drehetra. Nandalo ny fampiharana Zwift tamin'ny findaiko aho, nampifangaro tsirairay ny zava-drehetra ary avy eo nampiasa Zwift Mobile Link izay azonao idirana amin'ny solosainao findainy. Raha vantany vao napetrakao amin'ny alàlan'ny Zwift Mobile Link dia afaka miteny fotsiny ianao hoe, Hey, fa tsy manandrana mampiasa ny bluetooth avy amin'ny solosaina findainy, mampifandray fotsiny amin'ny rohy finday an'i Zwift, izay efa manana ny lisitry ny entana tadiaviko rehetra. hampiarahina sy hampiasa ireo ary tampoka teo izy ireo.
Ankehitriny, raha te hilalao ny Zwift amin'ny efijery TV ianao dia mila zavatra toa an'i Google Chromecast na Apple TV. Tahaka ny tsy itiavako an'i Apple amin'izao fotoana izao, Apple TV miaraka amin'ny iPhone na Macbook, tsotra dia tsotra. Amin'ny iPhone iray dia misintona miakatra avy any ambany, atsimbadika ny efijery ary sokafy ny fampiharana Zwift ary avy eo dia hilalaovana amin'ny fahitalavitrao izany, raha ny marina, raha toa ka mifandray amin'ny WiFi mitovy amin'ny telefaonao ny Apple TV. miaraka amin'ny solosaina finday.
Tsindrio ny kisary fitaratra fitaratra eo amin'ny fantsom-pifandraisana an-tampony, ny rafitry ny solosaina findainy ary avy eo rehefa tafiditra ianao ary manangana ny kaontinao mombamomba an'i Zwift dia efa manana ny kaontinao mombamomba an'i Wahoo ianao, avy eo ny hany tokony hataonao dia ny manokatra Zwift ary rehefa Manomboka mitaingina ianao dia hangataka anao hifanaraka amin'ireo fitaovana rehetra efa fantany, tena, ny hany mila ataonao dia ny mihaona amin'ireo fantany ary tsindrio ilay mpanazatra mahay mifehy fa heveriko inona ilay Simbolo, ity no kicker ary tampoka ny Zwift anao dia mifehy ny fihenjanan'ny mpandaka. Tsy mampino izany. Rehefa miakatra avo kokoa amin'ny Zwift ianao dia miverina eto indray ny fihenjanana.
Rehefa midina ambany amin'ny Zwift ianao dia mihena ny fihenjanana. Ary na dia manomboka mifindra ao aorian'ny olona aza ianao dia manomboka mahatsikaritra ny fitomboan'ny hafainganam-pandeha sy ny fihenan'ny haavony rehefa misintona ireo sary kely novokarin'ny solosaina ireo teo amin'ny efijery ianao. Hitako fa manentana be ny mandeha mamaky ny fizarana sprint sy ny mpanjaka amin'ireo faritra any an-tendrombohitra ary rehefa mihaona amin'ny olona iray ianao dia midika hoe manidy ny banga ary tonga tahaka ny olona tonga ao aorianao, izay tsy nitranga velively, nahatonga ahy hijanona eo alohan'izay izy ireo.
Nivadika serivisy fampiofanana mahatsiravina io ho lalao mahafinaritra be. Avy tamin'izay aho nanao fanatanjahan-tena tsy nahy. Zwifter sy wahooligan amin'ny fomba ofisialy aho, misaotra betsaka.
Miditra aho, amidy. Soniao aho, aiza ny satroka? Oh ianao ve hijery an'ity Oh oh ahoana izany Mmm, mmm, mmm, mmm. Hashtag tsy misy dokambarotra.
Okay Trainiacs, mahazo sneak pee kof foibe triathlon vaovao ao Taren ianao tsy ho ela. Miasa an'io izahay anio tolakandro, andao hiaraka amiko. Avelao aho hanome anao rondown haingana ny foiben'ny triathlon ho avy ao Taren.
Noho izany, amin'izao fotoana izao dia voarafitra. Misy vavahady garazy io. Tsy manana mpanokatra varavarana garazy izy, manana ny varavarankely, ary mahery ny herinaratra.
Ny tetik'asa hataoko amin'ity herinandro ity dia ny fanafanana eto. (mozika faly) Woo! (mihomehy) Pow, eny andao hanao izany. (Hira mahafinaritra) Dingana iray lavitra ary vonona ny hitoka-monina izahay izao.
Vonona ny hitoka-monina aho. Woof, Trainiacs taty aoriana, dia manao takariva mahatalanjona. Alika, mandehana!
Manginy fotsiny ve ny snap an'i Kickr?
nyKICKR SNAPdia natao ho somarymangina, fa mahazatra ny miaina hum na buzz rehefa mitaingina. Azafady mba mariho fa mety hiaina tabataba fanampiny ianao amin'ny fanaovana spindown na pedal amin'ny hafainganana haingana.
Androany aho mijery ny fomba ahafahanao mampangina ny mpanazatra anao tsara. Manomboka eto amin'ity dia misy ny Tacx NEO 2T vaovao. Ary manomboka amin'ity dia hatrany amin'ny Wahoo Kickr 18 ary avy eo mankany amin'ny Saris H3.
Ny fandidiana mangina no fenitra vaovao ho an'ny mpanazatra mahay. Lasa ny andron'ny mpanazatra ny rivotra sy ny fehikibo drivetrain mitabataba rehefa mandeha tongotra ianao, fa rehefa mijanona sy miantsambotra ianao dia tantara hafa tanteraka. Ny feo henonao ao dia ny fanamafisam-peo amin'ny freewheel, ny pawl amin'ny freewheel izay manondro ny nifin'izy ireo rehefa mihodina izy ireo.
Ny A araka ny freehubOutdoor dia azo heverina ho faniry. Hampahafantatra ny olona fa lavitra anao ny iray kilaometatra, saingy tsy tena misy tanjona ao an-trano izany. Afa-tsy ny fampahafantarana amin'ny olon-kafa rehetra fa mihemotra ianao amin'ity fampihetseham-batana ity.
Tokony handeha mafy kokoa ianao. Ka noho ny fomba nampiasako nandritra ny taona maro mba hampitoniana ny mpampiofana ao anaty trano, saingy aloha misy naoty roa hitadidy an'ity toro-hevitra ity dia ny fomba hahatonga ny mpampiofana ho mangina rehefa mihodina ianao, dia alefantsika fotsiny ny freewheel mba hangina ny lavaka fanaintainanao rehefa mampitony ny zavatra rehetra dia zavatra hafa fa ny ataontsika ankehitriny dia mandeha any amin'ny foton'ny lelafo isika, ny loharanon'ny fihenan'ny tabataba, ary avy eo afaka manao ny zavatra hafa rehetra isika avy eo. Ny valiny ho azonao amin'ny fanatanterahana ny dingana mitovy eto dia mety miovaova arakaraka ny mpampiofana anao, ny toe-piainana misy azy ireo, ary ny tontolo iainana misy azy ireo, fa ho an'ny ankamaroan'ny mpanazatra, fiara mivantana loatra, ny fotokevitra dia mitovy amin'ny ahy ihany asehoy eto anio, tsy mbola nahita olana tamin'ny fanatanterahana an'io asa io tamin'ny mpampiofana ahy aho.
Nahita mpanazatra sasany mihitsy aza aho manana freewheel efa maina. Ka mety ho zavatra tsara izany, ary amin'ny farany, torohevitra mahitsy kokoa. Heveriko fa antsoiko moramora ny fanosotra ny nify freewheel sy ny fanosorana menaka malefaka ny labozia, saingy tsara ho an'ny ivelany sy ny fampisehoana izany, saingy ao anatiny dia mila mandeha lavitra kokoa amin'ny lavaky ny bitro ianao ary miditra amin'ny faritra iray izay mety hahitana ny tonga lafatra. manomboka mikorisa amin'ny zavatra hataoko eto - ambany be.
Eny, andao hanomboka Eny, voalohany handrakofana ireo fitaovana hampiasako anio, manana fitaovana fanesorana cartridge ho an'ny adidy mavesatra izahay, manana andiana wrench Allen sy valizy vitsivitsy ary lamba famaohana isika, mazava ho azy mba hitazomana ireo zavatra mahafinaritra sy milamina aloha, ho azontsika ilay jerena Ilay Tacx NEO 2T, izay, araka ny henonao, dia be ny tapakila. Okay thru-axle bisikileta miala - fitaovana roa mila esorina aloha mba hahafahako manala ny freewheel amin'ny mpampiofana mba hivoaka ilay adaptatera ary avy eo mipoitra ilay freewheel fa tsy menaka fanosotra betsaka. Afaka mahita ireo takelaka ianao.
Mivalona miverina arak'izay tiana izy ireo. Fa izany dia manazava tsara ny antony mahatonga ny Neo 2T hitabataba be rehefa voahodina Okay, apetaho amin'ny nifinao ny menaka, raiso ny takelaka ary alao antoka fa mbola mipoitra izy ireo ary tsy miraikitra. Ny menaka miraikitra tokoa no mahatonga ireo kibay ireo ary tena tsy izany no tadiavinao.
Saingy mihatra eo izany ary tsara, okay, nivadika toy ny teo aloha ny fametrahana. Hamafiso ny kodiarana ivelany 2 an'ny fitaovana boribory ary anjaranay minitra vitsy monja dia vita isika. Mandrosoa famaky ao ambadika, miverina miverina herinaratra, Ary izany dia miaraka amin'ny mic shotgun ka nitodika tany amin'ny mpanazatra izany mba hahafahanao maheno ny zava-drehetra Trademark NEO any ary ny morontsiraka dia manana 1.000.000% tsara kokoa.
Tsy misy fanontaniana momba izany! Mbola misy an'io purr io fa tsy ilay fikorontanana mahatsikaiky akory, ary fitsapana vitsivitsy fotsiny eto mba hahazoana antoka fa tsindrio ny takelaka ary tsy mikatona Ny mpankafy kely ao anatin'ny NEO 2T no henonao ao, ilay Alrighty mafy eo akaikiny ny Wahoo Kickr 18 Ankehitriny dia tsy maintsy esorintsika indray ny cassette hanesorana ny foiben'ny freewheel. Ka ny roa voalohany ary somary manahirana ny manala azy ka esorinay ilay kasety iray manontolo miaraka amin'ilay fitaovana ary any no alehanay, lasa izahay, matavy kokoa amin'ity iray ity nefa mbola matavy be ihany io, azo antoka fa tsy mahazaka feo ka isika te-hanala ny tavy teo aloha rehetra ao. Tsy tiako ny mampifangaro tavy roa, ka esory arak'izay azo atao ary apetraho amin'ny fomba malala-tanana tokoa.
Ankehitriny. Raha manana olana ianao amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny freewheel dia avadiho fotsiny ary atosiho ny pawl. Matetika misy fehiloha lakile izay hidina ary hiditra amin'ny toerana hafa.
Eo indray dia mandeha amin'ny alàlan'ny adaptatera thru-axle, miverina mandeha indray ilay kasety miaraka amin'ilay fitaovana. 2 peratra ivelany sy peratra fanidiana Misy eo amin'ny bisikileta indray isika amin'ny Kickr 18, amin'ny alàlan'ny famaky. Tena tsara tokoa ny fanohanan'ny axe-n'ny tompon-tany Eny ary, mandrak'androany, ny mikrôfôma aleha dia manamafy ny tabataba eto amin'ity lahatsoratra ity mba handehanana any Ary farany, ny tadim-baravarankely rehetra an'ny sareza H3 dia tena mafy tokoa izao. ny menaka fonosana kely ao amin'izy ireo izay avoakako dia manana loko mena mandany fotoana kely aho hanesorana izay rehetra mety ho be menaka indrindra.
Fandehanana maimaim-poana amin'ireo mpanazatra telo Ka amboary ny zava-drehetra miaraka amin'ny entana vaovao, mahitsy, tsy tokony esorina ny kasety ary miloka eto aoriana i Max. Ny tena antony itiavako mpampiofana mangina The ironies Little max. Eny ary, avereno eto ilay sambo mitafy Saris H3 ary anjarantsika ny manao fitsapana ny pedal Oay io fihodinana io sy ny fidinan'ny rivotra Mety ho iray amin'ny feon'ireo telo ireo, saingy mbola mangina tokoa eo amin'ny sehatry ny feo, ary fifampiraharahana vitsivitsy fitsapana fotsiny mba hahazoana antoka fa tsy misy freewheel mihitsoka na mihidy ny kitapo ary vita izany ny asa.
Tena tiako izany. Misaotra anao nijery
Manana fanoherana ve i Wahoo Kickr snap?
KICKR SNAPBike Trainer dia mampiasa ny smartphone, tablette, solosainao na fitaovana GPS hifehezanafanoheranaary omeo fandrefesana herinaratra azo itokisana ianaoafakamanaraha sy manitsy ny hamafinao.
Ka ny mpanazatra mahay amin'ny maody ERG, inona izany. Androany dia misitrika isika ary mijery. Voalohany indrindra, ny famaritana ny teny ERG dia nohafohezina avy amin'ny ergo, ary ny fandikana mivantana avy amin'ny teny grika dia ny teny hoe work, diniho ity fomba fiasa ity.
Ny milina familiana anaty trano dia efa fantatra amin'ny hoe bisikileta fanatanjahan-tena. Ary tamin'ny noforonin'ilay mpanazatra marani-tsaina dia namboarin'izy ireo ity teny ity ary nohafoheziny ho amin'ny mode Erg ho an'ny mode sasany azon'ireo mpampianatray atao. Tena ny Erg mode ve ilay mode Erg? Ny maody erg dia iray amin'ireo maody telo na efatra samihafa izay ahafahan'ny Smart Trainer ampiasaina amin'ny fampiofanana anao.
Ny maody hafa dia ny mode basic na ny level, izay manova ny mpampiofana anao ho bisikileta mandaitra mahomby miaraka amina toerana samihafa ary manana iray ka hatramin'ny folo ianao. Fomba tena tsotra. Sim mode izay mandray ny lanjanao, ny haavonao, ny CDA, ny karazana bisikiletanao, ny rivotra miampita sy ny zavatra isan-karazany.
Miankina amin'ny rindrambaiko ampiasainao dia hainay tsara ny maody sim amin'ny freeride n zwift ary avy eo manana ny maody erg izahay, izay no anton'ity lahatsoratra ity anio. Ny maody Erg dia hidina amin'ny wattage voatondro ary hihazona izany fanoherana izany na inona na inona cadenanao na fitetezanao. Raha te hanao 300 watts dia tsy misy safidy, mila mankany amin'ny wattage voatondro ianao izay hotazonin'ny mode erg anao.
Midika izany fa raha ataonao 300 watts ny maody erg dia hametaka anao amin'ny 300 watt izy na inona na inona 70 rpm 110 rpm 130 rpm ao amin'ny lasely ivelan'ny lasely dia mila manao 300 watts ianao. Mila mitazona ny kodiarana ianao ary mitazona izany hery izany amin'ny 300 watt. Mety ho henjana izy io.
Ka io no andiany tsotra indrindra amin'ny maody Erg, saingy manampy rindrambaiko ambonin'izany ianao dia manova ny fanoherana ho an'ireo faritra ireo ho anao ary manana traikefa tena tsara ianao. Ny mampiavaka ity rindrambaiko ity dia ny fametrahana ireo fampiofanana ireo miorina amin'ny isan-jaton'ny FTP fa tsy isa tsotra fotsiny, ka tsy 300 watt fotsiny, fa ny 300 watts ho ahy dia hafa noho ny 300 wa tts ho anao sy ny olon-drehetra. Raha tokony hiorina amin'ny FTP anao na ny isan-jato amin'izany, izaho sy ianao dia afaka manao fanatanjahan-tena mitovy amin'ny isa fampisehoana manta samihafa ary mbola mahazo valiny fiofanana mitovy.
Ny mode Erg dia mitovy amin'ny moto mivezivezy izay misy olona manana pedal gasikara ary tsy afaka misafidy ny hamafiny ianao, mila mitazona ny bisikileta fotsiny ianao ary manohy. Raha mihodina ny pedal fitaterana haingana ianao ary mihasarotra dia tsy maintsy mandeha mafy ianao. Raha mihemotra kely ianao ary miadana dia afaka miadana ihany koa.
Tsy voafehinao ny hafainganana. Ny sisa ataonao dia ny mitazona ny kodiarana. Ny tsy fitovizan'ny hafainganam-pandehan'ny motera ivelany sy ny mode erg an-trano kosa, raha alatsaka any ivelany ny kodiaran'ity moto ity dia azonao atao ny manalefaka ny pedal, azonao atao ny mijanona, miala sasatra kely ary mamarana ny andro na miverina amin'ny bisikileta raha vantany vao moto mitohy.
Hafa kely ny mode erg. Ny mode Erg dia somary ratsy toetra rehefa tonga kely dia vao maika mihombo ireo watts ireo. Tsy hilatsaka ny kodiarana fa hataoko manao ireto watt ireto ianao.
Ary izao dia hampahafantariko anao ilay antsoina hoe spiral d'exploitation. Ny tena zava-mitranga dia ny mpanazatra tenany ihany no mila manova ny fanoherana arakaraky ny tadin'ny dian-tongotrao. Ka tsy milamina ny olona. re tsy ara-dalàna kely.
Ka amin'ny mode Erg, na dia 300 watts aza dia ho 310, 290, 300, 310, 280, 350, hihodina kely fotsiny izy io. Ny mpanazatra samy hafa dia manao azy amin'ny fomba hafa noho ny hafa, ary ny malama ny dian'ny pedal, dia tsara kokoa izany. Fa raha midina ianao, raha midina amin'ny 280, dia 270 ary lasa 250 ny kapoka ataonao dia ho hitanao izay hitranga.
Hihombo kely kokoa izy io ary hiezaka ary hahatsara azy io, mitazona ny wattage an'ny mpanazatra 300. Tsy mitazona ny wattage misy anao io, miankina aminao ny mitazona ny wattanao anao. Raha tsy afaka tadin'ny fahafatesana ianao.
Miovaova kely ny fiovan'ny mpampiofana marani-tsaina isan-karazany, ny sasany haingana kokoa noho ny sasany, ka ho an'ny ezaka fohy eo anelanelan'ny 5 sy 15 segondra y dia afaka manana fotoana be dia be ianao ao, na amin'ny fifindrana amin'ny herinaratra ilaina sy amin'ny famerenana indray. Ho an'ny ezaka haingam-pandeha fohy kokoa dia tsy manoro hevitra ny maody Erg aho. Na inona na inona mihoatra ny 20 segondra na mihoatra, mety mahasoa toa ny mode Erg ve izy? Izany dia manampy firafitra tena tsara amin'ny fotoam-panazaran-tena.
Azonao atao ny mahita ny tena mandeha, ny toerana nalehanao, ary ny sarotra alehanao, ary rehefa manana andro tsara ianao dia tsara ny miady amin'ny tsirairay amin'ireo elanelam-potoana ireo ary mamely ny fampisehoana tadiavinao. Mety ho antony manentana tokoa ny hoe raha vao manamarina ireo boaty ireo ianao dia tonga any, tsara ny andro. Ary ho an'ny fitsapana dingana, mamirapiratra izy io, mametraka ny wattage ho anao izy, mandehandeha fotsiny ianao mandra-pahatonganao mankany amin'ny tadin'ny fahafatesana ary avy eo ianao dia afaka mahazo ny kajy amin'ny alàlan'ny FTP anao.
Fa maninona no halako ny maody Erg? Sady artifisialy io. Tsy mamerina na inona na inona amin'ny tontolo tena izy hitazonana anao amin'ny wattage iray. Eny, mety amin'ny bisikilet'olona miakatra havoana.
Na toy ny nolazaiko, ny série moto paci ng, fa miaraka amin'ireny dia azonao atao ny mampiato azy ireo amin'ny fotoana rehetra ary manafoana indray. Raha tsy azonao atao ny mamely ny isa anao ao anatin'ny iray andro amin'ny maody Erg, dia mety tena hampihena ny ainy. Ary ny mikapoka ny fihodinan'ny fahafatesana amin'ny antsasaky ny session dia mety ho andro mahatsiravina.
Mba hialana amin'ny tadin'ny fahafatesana amin'ny andro ratsy, ny rindrambaiko sasany dia manana switch kely ahafahanao mametraka ny sandan'ny FTP na ny tanjanao isaky ny valiny. Mety hitombo na hihena ny ezaka. Raha tsy manana tsara ianao dia afaka misintona azy hatramin'ny 90 isan-jato.
Na raha manana andro tsara ianao dia afaka mahatratra ireo tanjona kendrenao tena mahaliana anao, dia azonao atao izany hatramin'ny 110 Ampitomboy isan-jato ary arakaraka ny mpanazatra anao sy ny fahaizanao mandeha pedal, heveriko fa izany koa miankina amin'ny havizanana madio. Afaka mahandro tena amin'ny fampiasana FTP ianao na FTP fotsiny mba hanitarana ny fiezahana amin'ny maody Erg. Ny tena zava-mitranga dia ny manetsiketsika ambony sy ambany ary ambony sy ambany manandrana manao izany watts izany.
Ireo spikes kely ireo na dia mametraka soritra eo amin'ny rafitra aza ireo bitika manaraka ireto dia tsy ampy hamerenana amin'ny laoniny ny rafitra. Mety ho sarotra aza ny mitazona ny FTP amin'ny maody Erg mandritra ny 10 minitra. Ka izany rehetra izany dia momba ny maody Erg ary inona izany, andao hitsambikina amin'ny bisikileta isika ary hijery ny hetsika.
Fampisehoana ny maody Erg amin'ny bisikileta. Ny ampiasaiko dia ny fampiharana Wahoo fitness amin'ny iPad, hifehezana ny wahoo Kickr, azonao atao ny mahita ireo maody samihafa ananako amin'izao fotoana izao, ka ny maody haavo, ny maody fanoherana, ny mode erg no tadiavintsika anio hariva. Hatreto aloha dia 300 watts no nampiasako ohatra.
Andao mankany amin'ny 300 watts amin'ny maody erg. Henoy ny fanoherana napetraka. Naharitra segondra vitsy dia 300 watts aho izao.
Ka ny adiresiko dia eo amin'ny 80. Raha mahatratra izany hatramin'ny 100 aho dia mbola hanao 300 watts. Rehefa avadiko ity cadence ity dia maharitra segondra vitsy dia mbola manao 300 watts foana aho.
Araka ny hitanao, na inona na inona cadence ataoko dia mahavita 300 watt. Ka ny zavatra artifisialy na tsy voajanahary indrindra momba ny Erg Mode dia, raha mihemotra kely ianao dia mihasarotra avy hatrany ny fialana. Ary mba hamerenana azy dia mila manamafy ny tenanao ianao.
Ka tsy misy fitsaharana, tsy misy kamo. Ny voalohany, ny zavatra tokony ho fantatrao momba ny Erg Mode dia ny hoe rehefa miverina ianao dia tsy voajanahary fa mihasarotra hatrany. Na raha mampitombo ny tadinao ianao ary mampitombo ny tadinao ary mampitombo ny isanao, dia tsy hijanona izany raha tsy hampitovy ny tenanao ianao ary hahatratra ny wattage voatondro ny rafitra.
Ka eto dia azoko atao tsara ny mamono azy. Saingy tsy hoe mandra-pandanjalanjako ny cadence hifanaraka amin'ireo watts ireo ary hitazona ahy hatrany amin'ny 300. Ny maody Erg dia tia ny fahamendrehan'ny cadence.
Raha vantany vao tonga amin'ny cadence iray izy dia afaka manitsy ireo watts ireo ary mametraka azy amin'izay nolazainay tao 300. Mba hampitomboana ny filanao dia hanenjika anao kely toy ny alika aorian'ny baolina izy. Ary azonao atao ny miakatra Go 160 RPM, afaka mankany ianao, saingy haharitra mandra-pijanonanao ny fampitomboana ny cadence dia hidirany sy havoakany izy ireo Tokony hanova fitaovana amin'ny alàlan'ny mode Erg ve ianao? Mazava ho azy fa tsy mila sakafo ara-dalàna aho, misy lahatsoratra iray hafa izay hataoko momba an'io tanteraka.
Amin'izao fotoana izao, mifikitra amin'ny 53, angamba 17 na 18 any aoriana, izany dia mety ho anao ho an'ny ankamaroan'ny fotoam-pivorianao. Ka ny fihodinan'ny fahafatesana dia avelao aho haneho anao amin'ny toe-javatra roa. Ka miverina amin'ny 300.
Eny ary, ny tranga voalohany amin'ny tadin'ny fahafatesana dia ny tsy fisian'ny fifantohana. Vita. Mijanona.
Te hitazona ahy amin'ny 300 izy ary tsy nandeha an-tongotra aho ka izany dia mampifantoka ny saina sy mijery an'io hadalana io. Ka ny erg mode dia novonoina nandritra ny segondra vitsy ary niverina niverina nitsidika ahy aho. Ny tadim-piainana manaraka amin'ny fomba maty dia ny fanitsiana ny làlan-kivoahana izay tsy zakanao.
Ka momba ny wattage voatondro izay tsy zakanao fotsiny. Avelao aho hanoro anao izany, handeha amin'ny 600 watts isika, afaka mitazona 600 watt na segondra vitsy aho, fa misy ny famonoana ho faty. Haingana be dia haingana no nitrangan'izany.
Afaka mitazona 600 mandritra ny iray minitra mahery aho amin'ny andro tsara. Avy eo? Tsy segondra vitsy akory. Tsy nanafika araka ny tokony ho izy ny fiovan'ny fitaovana aho.
Avelao aho hanoro anao ny fomba mitaingina ny maody erg amin'ny kodiarana avo sy ambany. Satria samy hafa kely ny mpampiofana rehetra, ity no fampisehoana faha-2 an'i Kickr anao momba ny fomba itondrako ireo fanovana tetezamita ireo. Manomboka amin'ny 300 ka hatramin'ny 600 isika ary tsy maintsy manafika ity fiovana tampoka ity.
Ka tsy maintsy manafika hatramin'ny 300 ka hatramin'ny 600. Tsy maintsy manafika ireo 600 ireo isika. Mahatratra 600 isika.
Raha mbola manafika ity fandefasana ity ianao ary andao hiteny hoe tsy zakako izany ary eo am-pelatanan'ny fahafatesana isika. Bitit kely dia hipetraka ary hametraka anao amin'ireo 600 watts ireo. Ny ohatra manaraka ny maody Erg izay homeko mba hanavotana anao amin'ny tadin'ny fahafatesana dia toerana misy wattage avo dia hifindra any amin'ny wattage ambany ary tsy ho tratra ny tadin'ny fahafatesana.
Ny tokony hataonao dia ny hipetraka eo. Avelao fotsiny ny rafitra hanao ny fanovana, tsy mila manafika azy ianao, ary ny zavatra voalohany tsy azonao atao dia ny miala amin'ny pe. hisintona dals.
Amin'ny faran'ny fiatoana mafy, ny zavatra voalohany tianao hatao, ny dimy efatra telo roa aah, ary miala sasatra kely. Tsy afaka manao an'izany ianao. Tsy maintsy mitondra fiara dimy efatra telo roa ianao ary miandry ny rafitra hanovana.
ekipa tour de france
Ka rehefa mandray fahefana tetezamita ianao dia mila manafika azy, rehefa esorinao io dia mila mitaingina azy ianao, koa manafika azy ary mitaingà azy. Avelao aho hampiseho aminao ny fomba ahafahan'izy ireo mitaingina azy ireo, ka andao hiakatra hatramin'ny 500 watts. Ka manafika ireo 500 watts ireo aho mba hahafahako mitazona izany, noho izany dia mitaingina 500 isika.
Midina amin'ny 200 watts isika hanakatonana ny rafitra. Avy hatrany mampihena ny dia amin'ny alàlan'ny fihenam-bidy. Ahoana raha tsy mamaky ny fanidiana ianao - Ary mihemotra be loatra amin'ny pedal ianao? Andeha hojerentsika izany.
Ka hatramin'ny 500 dia manafika 500. Dimy efatra telo roa iray, oh, vita 200 watts isika. Ok, mandeha an-tongotra maivana aho ary mihodina ny fahafatesana.
Tsy maintsy mamakivaky ity tetezamita ity aho, mivadika any ambany. Ok, izany no ho an'ny fivoriana natrehana anio alina. Andao hofonosina ity lahatsoratra ity.
Tamin'izay no nohazavainay ny maody Ergo ary nasehontsika teto tamin'ny bisikileta androany. Misy olona tia an'io. Misy mankahala azy io.
Eo amin'ny fefy aho. Mianatra ny hitia azy amin'ny ezaka farany nataoko. Ka miahiahy aho fa hampiasa azy io bebe kokoa.
Tsy voatery amin'ny fomba fanofanana ihany koa. Azonao atao ny manodina azy io na mamono azy raha hitanao fa mora kokoa izany ary indrindra ho an'ireo ezaka fohy kokoa izay mety tsy manomboka haingana ho anao ny maody ergo. Ok, avelantsika ho an'ny anio izy io.
Misaotra nijery. Ny fisoratana anarana, ny tianao ary ny maro hafa momba ny hevitra dia raisina an-tanan-droa. Mandra-pihaona.
Misy ny tadin'ny fahafatesana. Haingana be dia haingana no nitrangan'izany.
Mila sensor sensor momba ny cadence amin'ny snap Kickr ve aho?
nyKICKR SNAPmandrefy sy mamindra ny angona hafainganam-pandeha sy ny angovo ihany. HO AN'NYcadenceizahay dia manoro hevitra ny hampiasa hafainganana sycadence sensortoy ny RPM na BLUE SC. Ho an'ny tahan'ny fo dia mamporisika anao hampiasa ny tahan'ny fosensortoy ny TICKR X.
Fa maninona i Zwift no milaza fa tsy misy famantarana?
Hamarino tsara fa ny slider fanoheranadiatsy napetraka hatreny amin'ny OFF. ianareoafakazahao ny slider fanoherana ao amin'ny Menu> Fikirana. Andramo ny mampiaraka sy mampiaraka ny mpampiofana anao amin'ny maha mpanazatra voafehy anao. Esory amin'ny herinaratra ny mpampiofana anao ary ampidiro indray ary andramo ampiarahina indray ho mpanazatra azo fehezina.
Tsara kokoa ve ny ANT + noho ny Bluetooth?
Noho ny protokolan'ny fifandraisana Bluetooth dia afaka mandefa data haingana kokoa izy ionoho ny ANT +, 64x isan-tsegondra eo ho eo, 16x haingana kokoanoho ny ANT +. Rehefa mampiasaBluetooth, raha vao misy fifandraisana eo amin'ny fitaovana roa vita, tsy misy hafaBluetoothaccessories dia afaka mifandray amin'ny fitaovana iray ihany.
Mendrika ve ny fiakarana any Wahoo?
The Kickrmiakatradia fitaovana mampiakatra sy mampidina ny alohan'ny bisikiletanao, manahafanamiakatrahatramin'ny 20%, ary ny razambe -10%, amin'ny tolo-kevitra ny hamerina ny traikefa ivelany araka izay azo atao mandritra ny bisikileta anaty trano. Na izany aza, ho an'ny saro-kenatra fotsiny? 500, dia mety ho fampanjariam-bola heverina ho be mpampiasa.
Mila sensor sensor momba ny cadence ve aho miaraka amin'ny mailaka Wahoo?
Wahoo Kickr Cadence
nyWahoo Kickr Snapmiaraka amin'ny metatra sy ny hafainganam-pandehasensor, fa tsiacadence sensor. Ianao noNILAirerycadence sensor(Adapter Ant + sy USB miaraka amin'ny PC na Bluetooth misy telefaona / takelaka). nyWahoo Kickr Snapmiaraka amin'ny metatra sy ny hafainganam-pandehasensor, fa tsiacadence sensor.
Manova fitaovana amin'ny Wahoo Kickr ve ianao?
nykickrmanana izany fitsapana kalibration izany manokana. Ny metatra herinaratra Kickrs dia fantatra fa tapaka ihany. Mifantoha amin'ny mitaingina sy mamely ny tanjon'ny herinao.Manova no ampiasainatsy misy fiantraikany amin'ny metatra herinaratra fa ny herinao ihany.
Mpanazatra mahay ve ny Wahoo Fitness KICKR?
Wahoo Fitness Kickr Snap Review. Raha ny mpanazatra kodiarana momba ny kodiarana dia maodely ambony io izay misy fahatsapana an-dàlana ho an'ny famolavolana azy. Ny didim-pitsaranay. Ny Kickr Snap dia mpanazatra kodiarana tena tsara. Ity mpanazatra marani-tsaina ity dia mampiasa ny kodiaranao any aoriana hivadika singa fanoherana elektromagnetika azo ovaina azo ovaina.
Ohatrinona ny vidin'ny Wahoo KICKR core?
Raha vao nampiditra ny Wahoo Kickr Core tamin'ny taona 2018 dia tonga amin'ny alàlan'ny fanomezana an-dàlana avy any Wahoo izany. Eo anelanelan'ny Kickr ($ 1,199.99) sy Snap ($ 499,99), Kickr Core ($ 899,99) no ivon-toerana eo amin'ny vidiny sy ny kalitaony.
Iza no tsara kokoa noho ny Wahoo snap sa ny saris m2?
Ity manaraka ity amin'ny lafiny maro dia famerenana ireo mpanazatra mahay Saris M2 sy Wahoo KICKR Snap. Mampalahelo fa rehefa ho hitanao tsy ho ela dia vetivety ny famerenana ny Saris M2. Nandany fotoana bebe kokoa tamin'ny Wahoo KICKR Snap aho ary voaporofo fa zavatra niainana tsara kokoa izany. Fa mandeha mialoha ny tenako aho. Andao hanomboka hatramin'ny voalohany.